Iifoto zikaEnomoto zokuLala eziBini eziBonakalisiweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UIssui Enomoto ngumfoti waseJapan ohlala eYokohama, eJapan, isixeko esikwizibuko emazantsi eTokyo. Ebusuku usebenza njengomqhubi weteksi Ukujonga uhlobo lwengeniso yenyanga yemali, njengoko kusenzeka njalo ngamawaka amagcisa kwihlabathi liphela abafuna indlela yokuziphilisa ngaphambi kwelizwe elinzima njengale yokuyila.
Iteksi yakho isebenza njengesitudiyo sakho apho bamba amaxesha kwezo zitrato zaseTokyo ngelixa ujonga abakhweli. Ukuvezwa kwakhe kabini kwiifoto zakhe kuziguqula zibe luhlobo lwamaphupha apho isixeko, izibane kunye ne-asphalt zizinto ezingqonge abo bahamba ngeenyawo abathi ngamanye amaxesha bawele njengezithunzi.
U-Enomoto uyachaza iteksi yakhe njengohlobo lwe «ngwenya encinci» "kulwandle olukhulu" lwesixeko sezibuko. Uyaqhubeka nomsebenzi wakhe wobugcisa ekhangela ezo foto zibonisa ubusuku kunye nezo kona apho yonke into ibonakala ngathi iyenzeka.
Iifoto zakhe zokuvezwa kabini ziyabalisa intshukumo engapheliyo yabantu ababhukuqayo, engaziwa, izitrato zeso sixeko sikhulu. Zidlulisela kumbukeli loo moya kwaye phantse ungcoliseko oluvela namhlanje kubukhulu obunjalo.
Uninzi lwabalinganiswa abaphambili beefoto zakhe kubonakala ngathi balwa namandla emvula okanye umoya, okanye nangaphambi kokuba irobhothi ibalawule maxa wambi xa ukugcwala kubalulekile ekuziphatheni kakuhle kwabo bonke abemi.
La ulusu lokwahlula abo bantu kwaye usizi oluthi ngamanye amaxesha lubonakale kwifoto nganye lusenza sidlule kumbono walo mfoti ohamba ebusuku ehamba nekhamera yakhe ekhangela ubuntu obedlula phambi kokukhanya kwezibane zeprojekthi yakhe yemoto.
KuFacebook wakho y iwebhusayithi yakho for ndikhwele eyakhe inkwili.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokuhamba ngezitrato zaseTokyo, wakui.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iifoto zokuvezwa kabini zalo mqhubi weteksi waseJapan